म्याग्नेज तथ्य - तत्वहरूको आवधिक तालिका
मंगोनेज रासायनिक र शारीरिक गुण
मंगनीनी आधारभूत तथ्यहरू
परमाणु संख्या: 25
परमाणु वजन : 54.93805
खोज: जोहान गेहन, स्केलेले, र बर्गमन 1774 (स्वीडेन)
इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन : [एआर] 4s23 डी 5
शब्द उत्पत्ति: लैटिन म्याग्नेस : चुम्बक, पिरालोसाइटको चुम्बकीय गुणहरूको उल्लेख गर्दै; इटालियन म्यागानीज : म्याग्नेशियाको भ्रष्ट रूप
गुण: मंगोनीजले 1244 +/-3डिग्री सेल्सियसको पिघलने बिन्दु छ, 1962 डिग्री सेल्सियसको उबलते बिन्दु , 7.21 देखि 7.44 को (विशिष्ट आवधिकता) ( अट्रोट्रिकिक फारममा निर्भर गर्दछ), र 1, 2, 3, 4,6को वाल्व 7।
सामान्य मंगनीज एक कडा र भित्री खैरो खैरो-सेतो धातु हो। यो रासायनिक प्रतिक्रियाशील छ र धीरज ठंडे पानीलाई खारेज गर्दछ। म्यांगनीज मेटल विशेष उपचार पछि ferromagnetic (केवल) हो। त्यहाँ चार एट्रोट्रिक फारमहरू म्याङ्गनीज छन्। सामान्य तापमान मा अल्फा फारम स्थिर छ। गामा रूपले सामान्य तापमानमा अल्फा फारममा परिवर्तन गर्दछ। अल्फा फारमको विपरीत, गामा फारम नरम, लचीलो र सजिलैसँग काटिएको छ।
प्रयोग गर्दछ: म्यांगनीज एक महत्वपूर्ण मिश्र धातु एजेन्ट हो। यो बल, ज्योति, कठोरता, कठोरता, पहिरो प्रतिरोध, र स्टील्स को कड़ी मेहनत सुधार गर्न थपिएको छ। एल्युमिनियम र एंटिमिनी संगै, विशेषतया तांबेको उपस्थितिमा, यो अत्यधिक कोणुग्राही मिश्र धातुहरु हुन्छन्। मंगोनेज डाइअक्साइड को सूखी कोशिकाहरुमा एक डोजोलाइजर को रूपमा प्रयोग गरिन्छ र गिलास को एक decolorizing एजेन्ट को रूप मा प्रयोग गरिन्छ कि लोहे को अशुद्धता को कारण हरी रंगित छ। डाइऑक्साइड पनि कालो पकाउने सुत्न र ओक्सीजन र क्लोरीनको तयारीमा प्रयोग गरिन्छ।
मंग्नीनी रंगहरु कांच एक ईथितर रंग र प्राकृतिक पादरी मा रंगीन एजेन्ट हो। Permanganate एक oxidizing एजेन्ट को रूप मा प्रयोग गरिन्छ र qualitatitive विश्लेषण को लागि उपयोगी छ र दबाइ मा। मंगनीज पोषणमा एक महत्त्वपूर्ण ट्रेस तत्व हो, यद्यपि तत्वको प्रदर्शन उच्च मात्रामा विषाक्त हुन्छ।
स्रोतहरू: 1774 मा, गहान कार्बनसँग डाइऑक्साइड घटाउन म्यागजिनले अलग पारे। धातु पनि इलेक्ट्रोलीयस द्वारा वा सोडियम, म्याग्नेशियम वा एल्युमिनियमसँग अक्साइड घटाउन सकिन्छ। म्यांगनीज युक्त खनिजहरू व्यापक रूपमा वितरित छन्। Pyrolusite (MnO2) र Rhodochrosite (MnCO3) यी खनिजहरूको सबैभन्दा सामान्य हो।
आइसोटोज : एनएन -44 देखि एमएन -67 र एम -69सम्म म्याङ्गनीजियनको 25 एथ्रोपोट भनिन्छ। केवल स्थिर आइसोटोप एम -55 हो। अर्को सबैभन्दा स्थिर आइसोटोप एम-53 हो 3.74 x 106वर्ष को आधे-जीवन। घनत्व (जी / सीसी): 7.21
म्यांगनीज शारीरिक डेटा
पिघ्ने प्वाइंट (के): 1517
बोइंग पोइन्ट (के): 2235
रूपान्तरण: कडा, भित्री, भूरा-सेतो धातु
परमाणु रेडियो (pm): 135
परमाणु मात्रा (सीसी / mol): 7.3 9
कोभेलेंट रेडियो (pm): 117
ईनिक रेडियो : 46 (+ 7e) 80 (+ 2e)
विशिष्ट ताप (@ 20 डिग्री CJ / g मोल): 0.477
फ्यूजन ताप (केजी / mol): (13.4)
वाष्पकरण ताप (केजे / mol): 221
डेबी तापमान (K): 400.00
पलिङ नगरीता संख्या: 1.55
पहिलो आयोनिजिंग एनर्जी (केजे / mol): 716.8
ओक्साइडेशन स्टेटस : 7, 6, 4, 3, 2, 0, -1 सबैभन्दा सामान्य ओक्साइडेशन 0, +2, +6 र +7 हो
ल्याटिस संरचना: क्यूबिक
ल्याटिस Constant (Å): 8.890
सीएएस रजिस्ट्री नम्बर: 74 9-9 6-5
म्यागानी डाइअक्साइड प्रयोग गरिएको ग्लास बनाउन प्रयोग गरिन्छ। सामान्य सिलिका गिलास हरियो रङ्ग भएको छ र म्यांगनीज अक्साइडले गिलासलाई बैंगनी टन्ट जोड्दछ जुन हरियो लगाउँछ। यस सम्पत्तिको कारण, कांचका निर्माताले यसलाई 'ग्लासमैकरको साबुन' भनिन्छ।
मंगनीज मासु र कार्बोहाइड्रेट metabolize एंजाइमहरूमा भेटिन्छ।
मंगनीज हड्डीहरू, जिगर, गुर्दे र अग्लोमा पाइन्छ।
मंगनीजले प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण छ जुन हड्डियों, क्लट रगत बनाउँछ, र रक्त शर्कदलाई नियन्त्रण गर्दछ।
म्यान्जनीज हाम्रो स्वास्थ्यको रूपमा महत्त्वपूर्ण छ, शरीरले म्याङ्गनीजस्तो भण्डार गर्दैन।
मंगेनीन पृथ्वीको क्रसमा 12 औं सबैभन्दा धेरै प्रचुर तत्व हो।
मंगेनीनसँग2x 10 -4 मिलीग्राम / एल को समुद्री पानी ( प्रति लाख भागहरु ) मा प्रशस्त छ ।
Permanganate आयन (MnO4- ) मा +7 ओक्सीकरण राज्य मा मंगनीयन को राज्य छ।
मंगनीज म्याग्नेशियाको पुरातन ग्रीक राज्यबाट 'म्याग्ने' भनिएको कालो खनिजमा फेला पर्यो। म्याग्नेस वास्तवमा दुई फरक खनिज, चुम्बकीय र पियलुसाइट थियो। Pyrolusite खनिज (म्यांगनीज डाइअक्साइड) भनिन्छ 'म्याग्नेशिया'।
मंगनीजले फलाम अयस्कमा भेटिएको सल्फर ठिक गर्न इस्पात उत्पादनमा प्रयोग गरिन्छ। यसले पनि इस्पातलाई बलियो बनाउँछ र ओक्सीकरणलाई रोक्छ।
अधिकांश रेडियो सक्रिय तत्व भनेको के हो?
10 Argon Facts - Ar या Atomic Number 18
अमेरिकाियम तथ्य - तत्व 95 वा ए
Metalloids या Semimetals: परिभाषा, सूची को तत्व र गुण
कमजोर एसिड क मान
परमाणु संख्या 10
हेल्मियम क्यान्सर तालिकामा कहाँ छ?
मेट्रिक यूनिट उपसर्ग
मुक्तिदाता दिनको लागि शीर्ष 10 आध्यात्मिक वरदानहरू
तिनीहरूले के कुरा गरे? ऐतिहासिक कारणको मृत्यु
नम्बरहरूद्वारा ब्याकप्याक्स: साइजिंग र खरिद गर्ने गाइड
'मालो', '' माला 'र स्पैनिशमा सम्बन्धित शब्दहरू प्रयोग गर्दै
यूएस एमेच्योर च्याम्पियनशिप विजयी
थमस रैत जीवनी
उनको आमालाई सम्झनका लागि राजकुमारी लीयाको लागि यो सम्भव छ कसरी बुझ्न
एक प्रिन्ट बटन कसरी थप्नुहोस् वा तपाईंको वेब पेजमा लिंक गर्नुहोस्
2020 परास्नातक टूर्नामेंट मिति, योग्यता जानकारी
लियो न्यु चाउ घरहरुमा
ईश्वरले क्रिसमसलाई बेवास्ता गरे वा यो मनाउनु पर्छ?
"म नीलो हुँ" अवलोकन गर्नुहोस्
परमाणु संख्या 13 - रोचक एल्युमिनियम तथ्य
संस्कृत शब्द शुरुवात एम
गुलामहरूले जुन व्हाइट हाउस निर्माण गरे
अल्फ्रेड हिचकक र करी अनुदान क्लासिक सिनेमा
केही कोर र सामान्य कोर स्टेट मानकहरूको के हो?
कसरी रसायन विज्ञान मा मेनुस्कस पढ्न
कतार देश: तथ्य र इतिहास
कलेज छोड्न कसरी
WASP - द्वितीय विश्व युद्ध को महिला पायलटहरु
फारमहरू बीच कुराकानी गर्नुहोस्
एक Desiccant कंटेनर कसरी गर्ने